KOOXDA ISBUUCA EE UCL: 11-kii xiddig ee ugu bandhigga fiicnaa todobaadkan Koobka Horyaalladda Yurub oo lagu dhawaaqay – Gool FM
(Yurub) 12 Abriil 2019. Xiriirka kubadda cagta qaaradda Yurub ee UEFA ayaa ku dhawaaqay kooxda isbuuca ee Champions League ama 11-kii ciyaaryahan ee ugu fiicnaa todobaadkan tartankaas.
Xiddigaha 11-ka ah ee ugu bandhigga wanaagsanaa Koobka Horyaallada Yurub todobaadkan waxaa laga dhex waayey laacib ka tirsan labada kooxood ee ka dhisan Magaalada Manchester ee Man United iyo Man City kuwaasoo min hal gool looga adkaaday kulamadii ay la kala ciyaareen Barcelona iyo Tottenhan.
Liverpool oo 2-0 uga adkaatay FC Porto ayaa xiddigaha ugu badan ku leh shaxdan, waxaana ay ku yeelatay afar ciyaaryahan oo kala ah Van Dijk, Arnold, Keita iyo Firmino.
Kooxda labaad ee xiddigaha ugu badan ku yeelatay shaxdaisbuuca ee Champions League waa Tottenham oo 1-0 uga adkaatay Manchester City, waxaana ay ku leedahay saddexda laacib ee kala ah Goolhaye Lloris, Vertonghen iyo Son.
Barcelona oo 1-0 ku martay Man United oo ay marti ahayd ayaa ku leh shaxdan labadeeda difaac ee Jordi Alba iyo Gerard Piqué, halka kooxaha Juventus iyo Ajax ay ku leeyihiin min hal ciyaaryahan waana Cristiano Ronaldo iyo Neres.
Haddaba halkaan hoose ka eeg 11-ka ciyaaryahan ee ugu bandhigga fiicnaa tartanka Champions League isbuucaan:-
RASMI: Xiddiga ku guuleystay abaal-marinta laacibka isbuuca ee Champions League oo la shaaciyey